EACC oo ku daadalaysa inay dib u hesho dhul la iibiyay 1995 | Star FM
Home Wararka Kenya EACC oo ku daadalaysa inay dib u hesho dhul la iibiyay 1995
EACC oo ku daadalaysa inay dib u hesho dhul la iibiyay 1995
Guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa sheegay inuu ku dadaalaya sidii uu dib ugu soo celin lahaa dhul qiimihiisu yahay in ka badan 200 oo milyan oo shilin kaasoo ku yaalla xaafadda Loresho ee Nairobi.
Guddiga ayaa maxkamadda aaday waxaa uuna doonayaa in loo oggolaado inuu la wareego dhulkan oo la kala iibsaday sanadkii 1995-tii.
Dacwadda arrinkan ku saabsan ayay maxkamaddu dhageysan doontaa dabayaaqada bishan Toddobaad.
EACC ayaa ku doodaysa in dhulkaasi uu yahay mid dadweyne oo uu qorshuhu yahay in laga hirgeliyo mashaariic dhanka biyaha ah oo ay ka faa’iidaysan doonaan shacabka ku nool xaafadaha Loresho, Gigiri, Spring Valley, Nyari iyo Kyuna.
Guddiga ayaa su’aal geliyay qaabkii loo kala googooyay dhulkan kadib shakhsiyaad kala duwan looga iibiyay.
Dacwadda arrinkan ku saabsan ayay maxkamaddu dhageysan doonta dabayaaqada bishan Toddobaad.
Previous articleGarsoorayaasha maxkamadda deegaanka oo isku shaandhayn lagu sameeyay